Muvhuro, July 12, 2021 Muvhuro, July 12, 2021 Douglas Karr
Verbiage inoshandiswa nevanhu muindasitiri inogona kuvhiringidza. Kana iwe uri kutaura nezvekumaka ne blogging, iwe ungangodaro unoreva kusarudza mazwi akakosha kuchinyorwa kuti amake iyo uye kuti zvive nyore kutsvaga nekuwana. Tag manejimendi tekinoroji yakasiyana zvachose uye mhinduro. Semaonero angu, ndinofunga rakatumidzwa zita zvisirizvo… asi rava izwi rakajairika muindasitiri yese saka tichaitsanangura! Chii chinonzi Tag Management? Kumaka